“जनयुद्धको शुरुआत ६५ जनाबाट भएको थियो” – Nepal Japan
“जनयुद्धको शुरुआत ६५ जनाबाट भएको थियो”
नेपाल जापान ५ बैशाख ११:२७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धको शुरुआत ६५ जनाबाट भएको स्मरण गर्दै त्यसको १० वर्षको अवधिमा देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको बताउनुभएको छ ।
अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको शैक्षिक अभियान तथा दोस्रो र तेस्रो संयुक्त प्रदेश परिषद्को शनिबार उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले जनताको एजेण्डा बोकेका कारण आफूहरूलाई जनताको साथ प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
माओवादीप्रति भ्रम फैलाउने काम भइरहेको भन्दै उहाँले कोही भ्रममा पर्न आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभयो । माओवादीप्रति जनतामा विश्वास नटुटेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्षले भन्नुभयो, “केही मानिसले माओवादी सिद्धियो, प्रचण्ड सिद्धियो भनेर भ्रम छर्ने काम गरेका छन् । दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको छ । जनतामा त्यस्तो छैन ।”
उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफूहरूको कारणले आएको स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि बनिएको संविधान र कम्युनिष्ट आन्दोलनको व्यापक ध्रुवीकरण र एकतालाई जनताले गरेको अनुमोदनबाट राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो ।
आफूहरू यतिबेला सरकार गठन, पुनःगठनको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हिजोमात्रै कर्णालीमा के समस्या थियो, कहाँ गएर टुङ्गियो ? तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ । अब अस्तिमात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।”
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनका लागि करिब–करिब बहुमतको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको छ । अब केन्द्रमा यो अन्योलता र अराजकताको स्थिति अन्त्य गर्नका लागि हामीले केन्द्रीयस्तरमा पनि लगातार पहल गरेका छौँ । म यहाँबाट त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन बैठकमा जाँदै पनि छु ।”
आफूले देशका विभिन्न स्थानमा जनताको अपार माया पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मुद्दाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको हो त ? तल जाँदा जनतामा त्यस्तो पाइनँ । किन हाम्रो नेतृत्व हामीकहाँ आउँदैन ? भनेर गुनासो रहेछ ।”